Iindaba - Ngawaphi amashishini izixhobo zecwecwe lokulungiswa kwesinyithi esisetyenziswa ikakhulu kuwo, kwaye zeziphi iimfuno ezithile?
Ukucwangciswa kwesinyithi kwesixhobo seqokobhe ikakhulu kubhekisa kukuqhubekeka kokuqhubekeka kwamacwecwe omkhosi, kwaye inokudlala indima entle kakhulu kule nkqubo. Ngenxa yokuba iinxalenye zayo ezenziweyo zinamava, ke kwicandelo lonke Liye latsala umdla wabantu abaninzi, ke kwinkqubo yokuqhubekeka, kufuneka siziqonde ezi meko kwangaphambili apho amashishini asetyenziswa ikakhulu.
Uphuhliso oluqhubekayo lweshishini le-elektroniki lonxibelelwano kule minyaka idlulileyo liza kufuna iimfuno ezingaphezulu nangaphezulu zokulungisa kuzo zonke iinkalo, kwaye kwangaxeshanye kuya kuchaneka kakhulu, kuba iimveliso kwinkqubo yokulungisa inokuhlangabezana neemfuno eziphezulu. Uphuhliso lweshishini Ikwajamelene nefuthe elikhulu, uninzi lweenkampani ezaziwayo zasekhaya nezangaphandle zinokuba nemfuno yezi zinto, ke izinto zobuchwephesha ziya kubaluleka ngakumbi.
Ukuphuhliswa kweshishini lokuhamba
Xa usebenzisa ukuqhubekeka kwesinyithi okwenziwe ngeqokobhe lezixhobo, uya kufumanisa ukuba uninzi lweendawo zeshishini lokunyusa zikwachanekile kakhulu. Ngexesha lenkqubo yokwenza isicelo, zininzi iindidi zamalungu, kwaye wonke umenzi ophambili uya kuba nabanikezeli abaninzi abenza ukuhambisa kunye nokusasaza kubo, ke kufuneka sinikele ingqalelo kwezi meko ngexesha elithile, kwaye sikwazi ukwazi utshintsho oluthile kulo lonke ishishini. Oku kuya kuba nefuthe elihle kuthi sonke. Isetyenziswa kwimihlaba eyahlukeneyo, ke kufuneka kwenziwe ukhetho oluchanekileyo.